Waxa lagu sameeyo Isla de Lobos, yaab dabiici ah oo ku taal Jasiiradaha Canary | Wararka Safarka
Waxyaabaha lagu sameeyo Isla de Lobos
Luis Martinez | | Getaways, Jasiiradaha
Maxaa laga sameeyaa Isla de Lobos? Inta aanan ka jawaabin su'aashan, waxaa lagama maarmaan ah in aan kuu sheegno meesha ay ku taal goobtaas cajiibka ah. Waxay ku taalaa oo kaliya laba kiiloomitir u jirta Jasiiradda Canary ee Fuerteventura iyo sidoo kale sideed kaliya oo ka yimid Lanzarote.
Waxay si dhib yar u dabooshaa dhul dhan lix kilomitir oo laba jibaaran waxaana ku hareeraysan afar iyo toban oo xeeb ah oo leh jarar aad u qurux badan, boholo qurux badan iyo wabiyo lafo adag ah. Waxa kale oo ay ku taal Gacanka Bocaina meesha ugu sarreysana waa Caldera, oo dhererkiisu yahay 127 mitir. Laakin, annagoon hadal dheerayn, aan ku tusinno waxa lagu sameeyo Isla de Lobos.
1 Waxa lagu arko oo lagu sameeyo Isla de Lobos
1.1 Dabeecad mudnaan leh
1.2 Xeebaha leh soo jiidashada gaarka ah: El Puertito
1.3 Xarunta Turjubaanka ee Isla de Lobos
1.4 Kilidii lime iyo weel milix ah oo duug ah
1.5 Laydhka Punta Martiño, oo ah booqasho calaamad ah oo lagu sameeyo Isla de Lobos
1.6 Makhaayada Isla de Lobos
2 Talooyin ku saabsan safarka Isla de Lobos
Waxa lagu arko oo lagu sameeyo Isla de Lobos
Laydhka Punta Martiño ee Isla de Lobos
Meeshan sixirku waxay magaceeda ku leedahay xaqiiqda ah in, waagii hore, aagga ay ku noolaayeen shaabado suufi ah, oo sidoo kale loo yaqaan libaaxyada badda. Taariikhdeedu waxay dib ugu soo noqotaa wakhtiyadii Roomaanka. Daraasadihii ugu dambeeyay ee Universidad de La Laguna Waxay muujiyeen in Latinos ay dejiyeen jasiiradda, ugu yaraan si ku meel gaar ah, si ay u helaan dheeha guduudan.
Ka dib, waxaa gabaad ahaan u noqday budhcad-badeed iyo goob kalluumaysi oo kalluumaysatadu. Horeba 1865 kii Iftiinka Punta Martiño, oo aan gadaal ka hadli doono. Dhab ahaantii, ilaaliyeyaasha laydhka ayaa noqon doona dadka kaliya ee deggan markaas wixii ka dambeeya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray dhowr mashruuc oo laga dhisay Lobos kuwaas oo ku dhacay in la ilowsiiyo markii jasiiradda lagu dhawaaqay beerta dabiiciga ah 1982. Waxaa la odhan jiray Corralejo Dunes iyo Beerta Dabiiciga ah ee Jasiiradda Lobos iyo, marka lagu daro, waxaa loo kala saaray inay tahay Aagga Ilaalinta Gaarka ah ee Shimbiraha lagu dhex daray Shabakada Natura 2000.
Horudhacan lagama maarmaanka ah ka dib, waxaanu kula socdaali doonaa Isla de Lobos. Waxaan ku bilaabaynaa inaan kaala hadalno yaababkeeda dabiiciga ah ka dibna ku saabsan taallooyinkeeda, kuwaas oo sidoo kale leh.
Dabeecad mudnaan leh
Volcano La Caldera
Sida kaliya ee aad ku tagi karto Isla de Lobos waa doon taaso safaro maalinle ah ka soo qaadata Corralejo, ee Fuerteventura. Kaliya waxay qaadataa labaatan daqiiqo qiimuhuna wuxuu ku dhow yahay shan iyo toban yuuro qofka weyn. Intaa waxaa dheer, waa inaad ka codsataa oggolaansho Cabildo dhowr maalmood ka hor intaadan safarka sameyn.
Markaad ka soo degto jasiiradda, waxaad ka heli doontaa qol macluumaadka ah oo ku xiga oo aad ku arki doonto taallo xusuusinaysa libaax badeedkii ku noolaa waayadii hore. Ku dhawaad ​​lix kiiloo mitir oo laba jibbaaran oo duurjoog ah iyo dabeecad cajiib ah ayaa ku sugaya.
Socodka jidadkeeda si wanaagsan loo calaamadeeyay waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo Isla de Lobos. Sidoo kale qodobbada ugu xiisaha badan waa la xaddiday. Maskaxda ku hay in, maadaama ay tahay meel la ilaaliyo, ma awoodi doontid inaad ka baxdo waddooyinkan.
Waddada ugu caansan waxay ka bilaabataa koonfurta jasiiradda waxayna sii martaa gudaha ilaa ay ka gaarto wejigeeda waqooyi. Laakiin waxa ugu muhiimsan ee dalxiisku waa Volcano La Caldera, oo aanu hore idiinku soo sheegnay oo uu ka dillaacay, uu ahaa asalkii Lobos. Waxaad kori kartaa meesha ugu sareysa oo aad u fiirsato muuqaalka quruxda badan ee Lanzarote iyo dunes of Corralejo in ay ku siiso.
Waxyaabaha kale ee cajiibka ah ee dabiiciga ah ee aad ku arki karto safarkaaga jasiiradda ayaa ah wadan xun ee gudaha iyo basin ee lagoonyada. Haddii aanad xasuusan, waxaanu ku macnaynaynaa in dalka xun uu yahay dhagaxyo foolkaanooyin ah oo yara nabaadguuray oo laga helay dhul-engegan, halka daloolku yahay dalool ballaadhan oo dhulka ah. Ugu dambeyntii, waxaad sidoo kale u mahadcelin kartaa jable ee Jikada. Taa baddalkeeda, kani waa magaca loo bixiyay ciid folkaane ah.
Dhanka kale, sida aan sheegnay, Isla de Lobos waa meel ilaalin gaar ah oo shimbiraha ah. Kuwa ugu badan iyo kuwa aad arki karto waxaa ka mid ah biyaha dhogorta leh, maryaha iyo batroolka Bulwer's. Sidoo kale, waxaa jira nooc ka mid ah dhirta endemic ee jasiiradda. Waa baaqa Lobos waara.
Xeebaha leh soo jiidashada gaarka ah: El Puertito
Guryaha kalluumaysatada ee aagga Purtito
Waxaa jira xeebo iyo cooshado badan oo jasiiradu leedahay oo quruxdooda aad ka arki karto meel fog. Sababtoo ah mid ka mid ah oo kaliya ayaa loo ogol yahay gelitaanka bilaashka ah. Waxay ku saabsan tahay Puerto cove iyo biyaheeda saafiga ah waxay ku fiican yihiin quusitaanka.
Codadkani waa muuqaal riyo u eg. Waxay ka kooban tahay gacmo dhaadheer oo dhul volcano ah kuwaas oo qaabeeya biyaha nadiifka ah ee Atlantic abuuraya harooyin buluug ah oo turquoise ah. Waxa intaa dheer in agteeda aad ku arkayso guryihii hore ee kalluumaysatada oo ah dhismayaasha kaliya ee jasiirada ku yaala marka laga reebo laydhka oo aanu dib uga hadli doono.
El Puertito waa barkad dabiici ah waxayna ku taal koonfurta jasiiradda. Laakiin si isku mid ah ayaa qaali u ah La Concha ama La Caleta xeebta, oo isku meel ah oo aad uga weyn. Ciiddeeda cadcad ayaa soo taagan, in kasta oo ay sidoo kale leedahay dhagaxyo, iyo qaabkeeda fardaha.
Xarunta Turjubaanka ee Isla de Lobos
Waxaan horay u soo sheegnay gudbinta qolka aad ka heli doonto markaad ka soo degto jasiiradda. Waxay ku taal xarunta turjubaanka, halkaas oo aad ka haysato muunad yar oo ah wax kasta oo aad ka heli doonto meeshan sixirka ah. Waxaan kugula talineynaa inaad booqato ka hor intaadan bilaabin socdaalkaaga jasiiradda.
Kilidii lime iyo weel milix ah oo duug ah
Guryaha lime ee Isla de Lobos
Hadhaaga foornada hore ee nuuradda loo baahan yahay si loogu dhiso guryaha kalluumaysatada ee aan soo sheegnay ayaa wali ku sii yaal jasiiradda. Waxa kale oo aad arki kartaa guryaha milixda yar ee laga soo saaray milixda si loo ilaaliyo, saxda ah, kalluunka. Dhanka kale, meel u dhow korka, waad arki kartaa laba goobood oo qadiimiga ah kuwaas oo ka tirsan xilliyada Jandiense iyo Erbanense.
Laydhka Punta Martiño, oo ah booqasho calaamad ah oo lagu sameeyo Isla de Lobos
Taallada ugu calaamadsan jasiiradda waa nalka Punta Martiño, oo ay dhiseen shaqaale Boortaqiis ah 1865. Hadda, si toos ah ayuu u shaqeeyaa, taas oo ah, ma haysto ilaaliye. Si kastaba ha ahaatee, sida anecdote, waxaan kuu sheegi doonaa in caanka ah Antonio, kuwaas oo qaraabadoodu ay maamulaan makhaayadda kaliya ee Isla de Lobos. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo guriga iftiinka waxaad leedahay aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan xeebta Atlantic.
Makhaayada Isla de Lobos
Ka dib markaad ku safarto waddooyinka jasiiradda oo aad ku qubeysato El Puertito, waxaa jira wax kale oo aad sameyn karto ka hor intaadan soo celin doonta. Waxaan ka hadlaynaa tijaabinta gastronomy-ga macaan ee qaybtan jasiiradaha Canary.
Si aad u sameyso, waxaad haysataa makhaayadda aan ka hadlaynay. Halkaas waxaad ka cuni kartaa maraq majeero, fuud ka samaysan hilib ari iyo khudaar. Sida saxda ah ee xayawaankan ayaa caano laga helay si ay u noqdaan kuwo qurux badan farmaajo laga bilaabo Fuerteventura, oo lagu sameeyay qaabka dhaqanka.
Dhanka kale, cuntada aagga ayaa leh kalluunka oo ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan. Waxaa loo diyaariyey siyaabo badan, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu dhadhan fiican waa sancocho. Waxa uu ka kooban yahay qaybo ka mid ah kalluunka laftiisa oo ay la socdaan baradho, baradho macaan, gofio iyo mojo picón.
Inkasta oo aysan ahayn mid caadi ah Fuerteventura, laakiin sidoo kale jasiiradaha kale ee Canary, waa inaan kuu sheegnaa labadan diyaargarow ee aan hadda soo sheegnay. The gofiyo Waa saafi ah bur galley duban iyo sarreen ah. Dhankiisa. mojo basbaas Waa suugo laga sameeyay toon, milix, saliid iyo basbaas. Waxay noqon kartaa casaan ama cagaar iyadoo ku xiran midabka qaybta dambe. Waxay u adeegtaa sidii wehel suxuunta badan, laakiin, dhammaan ka sarreeya, si ay baradhada laalaabmay.
Dhanka macmacaanka, waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso frangollo. Waa baal ka samaysan ukun, sonkor, caano, daqiiq iyo sabiib. Ugu dambeyntii, waxaad ku dhameysan kartaa cuntadaada a xero yar. Waa qaxwo ay weheliyaan caano la shiiday, qaar khamri ah, qorfe iyo liin.
Talooyin ku saabsan safarka Isla de Lobos
Si loo dhammeeyo socdaalka aan kuu soo jeedinayno agagaarka Isla de Lobos, waxaanu ku siin doonaa xoogaa talooyin ah si aad ugu xisaabtanto ka hor inta aanad u safrin goobtan sixirka ah. Marka hore, waa inaad heshaa ogolaanshaha si aad awood ugu yeelato.
Laakiin, marka lagu daro, marka aad joogtid jasiiradda, waxaa lagama maarmaan ah in aad ixtiraamto calaamadaha iyo xeerarka looga baahan yahay. Xusuusnow inay tahay a meel la ilaaliyo waana inaad ka qaybqaadataa ilaalinta.
Tusaale ahaan, waa mamnuuc in lagu socdo bannaanka waddooyinka la oggol yahay, dab la sameeyo ama la ugaarsado. Laakin ma ururin kartid walxo bayooloji ah ama hidaha. Sidoo kale, ma qaadan kartid xayawaankaaga, mana aasi kartid qashinka.
Bedelkii, Kalluumeysiga waa la oggol yahay, laakiin kaliya meelaha loo qoondeeyay. Waxaad ku tababaran kartaa labadaba qaab ciyaareedkeeda iyo kalluunka qoloflaha ah ee ku habboon sed. Gaar ahaan, aagga xeebta ah ee loo oggol yahay kalluumeysiga waa kan tagaa Laga soo bilaabo Los Roques del Puertito ilaa Punta El Marrajo.
Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad keento cunto iyo cabitaan badan, iyo sidoo kale kabo raaxo leh oo aad ku dhex socoto jasiiradda. Sidoo kale, keen kareemka ilaalinta qorraxda. Cimiladu waxay soo bandhigaysaa heerkul dhexdhexaad ah, laakiin saacado badan oo qorrax ah, adiguna waad guban kartaa naftaada.
Gabagabadii, wax walba waanu soo jeedinay waxa lagu sameeyo Isla de Lobos. Waa meel cajiib ah dabeecadeeda, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee loo yaqaan jasiiradaha Canary. Haddii aad u safri doonto Fuerteventura ama Lanzarote, ha ilaawin inaad booqato. Waxay qaadan doontaa dhowr saacadood oo kaliya mana ka qoomameyn doontid inaad sameyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways » Waxyaabaha lagu sameeyo Isla de Lobos
Sida loogu safro motohome